Fampivoarana ny sehatr’asam-panjakana : Nomena fanampiana ireo Kaomina -
AccueilRaharaham-pirenenaFampivoarana ny sehatr’asam-panjakana : Nomena fanampiana ireo Kaomina
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny CCI Ivato, ny fanokafana sy fampahafantarana amin’ny fomba ôfisialy ny tetikasa fampivoarana ny sehatr’asam-panjakana (PAPSP) sy ny famatsiam-bola nasionaly ho amin’ny fitoviana. Ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga nanotrona sy nanokatra izany, niaraka tamin’ny lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, ary notronin’ireo Ben’ny tanàna marobe.
Araka izany, tetikasa avy amin’ny governemanta ny PAPSP izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola mitentina 40 tapitrisa Dolara mandritra ny efa-taona (2017 – 2020). Noho izay indrindra, voalaza fa tetikasa voalohany mifandraika tanteraka amin’ny famatsiam-bola mifototra amin’ny vokatra ny PAPSP. Izany hoe, mifototra indrindra amin’ny paikady sy ny asa eo anivon’ny Fond de développement Local na ny FDL, izay singa iray amin’ny famatsiana ireo kaominina.
Voalaza fa mitentina 12 tapitrisa Dolara ny fanampiana ireo kaominina ao anatin’izany amin’ny alalan’ny FDL izay mandritra ny efa-taona. Natao ho famatsiana ireo kaominina nahazo izany kosa io fanampiana io arakaraka ny tetikasa miainga madiodio avy amin’izy ireo, toa ny fanamboarana sy fananganana tsena, fanatsarana na koa fanamboarana lalan-kely kaominaly, fananganana paompin-drano fisotro madio sy fanatsarana ireny biraon’ny kaominina ireny, sns.
Nambaran’ny Filoham-pirenena fa ny PAPSP dia manampy betsaka amin’ny fahombiazan’ny fitsinjaram-pahefana. Izany, hoy izy, dia antoky ny fitantanana ny asam-panjakana sy ny raharaham-panjakana, sy ho fahamarinan-toeran’ireo andrim-panjakana. Tafiditra ihany koa ho ivon’ny politika ankapoben’ny Fanjakana izany.
Ankoatra izay, dia nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny fahasarotan’ny andraikitra sy ny iraka sahanin’ireo kaominina. Noho izay indrindra, dia nambarany fa mba hamaliana izany ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao amin’ny alalan’ireo ezaka ataon’ny Fanjakana, izay hiarahana amin’ireo ireo mpamatsy vola mahazatra. Voalaza fa hisy fiantraikany mivantana amin’ny vahoaka io tetikasa io.
Etsy andaniny, dia nisy ihany koa fanolorana môtô miisa 111 ho an’ireo lehiben’ny Boriborintany amin’ny Faritra Analamanga, Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Izany dia natao ho an’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy hanamarihana ny fametrahana ny famatsiam-bola nasionaly ho amin’ny fitoviana.